Sidee ku ogaan kartaa ciwaanka IP-ga ee qofka
1 Muxuu yahay cinwaanka IP-ga
2 Sida loo helo cinwaanka IP-ga qofka
2.0.1 Ka hel ciwaanka IP-ga qof Outlook Express
2.0.2 Ka hel ciwaanka IP-ga qof ee Apple Mail
2.0.3 Sida loo helo qof IP-ga Mozilla Tunderbird
2.0.4 Sida loo ogaado IP-ga qof Gmail-ka
3 Codsiyada lagu ogaanayo ciwaanka IP-ga ee qof
3.1 Codsiga CUALESMI-IP
3.2 Codsiga Aaladaha IP - Utilities Network
3.3 Hel codsiga IP
Waxay u badan tahay inaad mar isku dayday inaad hesho ciwaanka IP-ga ee qof oo aad ku guuldareysatey. Si kastaba ha ahaatee, macluumaadka aad ku akhrin doonto maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa sida loo helo IP-ga qof dhowr ilbiriqsi gudahood.
Si tan loo sameeyo, waxaan kuu sharixi doonaa sida aad ugu heli karto iimaylka. Intaa waxaa dheer, waxaad baran doontaa waxa ay tahay inaad sameyso si aad u hesho goobta juqraafiyeed ee qofka marka aad hesho IP-ga.
Haddaba, adigoon waxba dheerayn, sii wad akhrintan si dhamaadka aad u hesho Adress IP in aad rabto
Muxuu yahay cinwaanka IP-ga
La Adress IP o Internet Protocol waa tiro tirooyin ah oo ujeeddadoodu tahay in la aqoonsado kumbiyuutarrada iyo qalab kasta oo isku daya in uu ku xidhmo mid kale iyada oo loo marayo internetka. Waxay ka kooban tahay afar baloog oo tirooyin ah oo saddex jaantus ah oo ay kala soocaan dhibic waana kuwo gaar ah oo aan dib loo soo celin karin.
Sidaa darteed, IP-ga waxaa lala barbar dhigi karaa dukumeentiga aqoonsiga ee qofka ama taarigga baabuurka, maadaama mid kasta oo iyaga ka mid ahi uu gaar yahay ujeeddadiisuna tahay in la aqoonsado. Intaa waxaa dheer, sida ay dadku u isticmaalaan dukumeentigooda aqoonsiga si ay u fuliyaan nidaam kasta, sidaas si la mid ah qalab kasta oo ku xira internetka waa inuu lahaadaa ciwaan uu awood u leeyahay inuu la xiriiro.
Haddii kale, xiriir lama samayn karo, maadaama lambarkani yahay habka kaliya ee internetku ku ogaanayo inuu yahay kombuyuutar ama domain. Si la mid ah, waa in la ogaadaa in ciwaanka la yidhi uu oggolaanayo in si aan leexleexad lahayn loo helo taleefan kasta, kombuyuutar kasta ama qalab kasta oo ku xidha shabakad gudaha ama dibadda ah.
Sidaa darteed, waa in la tixgeliyo in ay jiraan laba nooc oo IP ah, hal dhinac, waxaa jira mid ka mid ah dadweynaha, kaas oo ah kuwa tilmaamaya oo ogaanaya qalabka ku xiran internetka. Dhanka kale, waxaa jira cinwaanka IP-ga maxalliga ah kaas oo, sida magaciisa ka muuqata, tilmaamaya IP-yada ku xiran shabakad maxalli ah, sida modem, router, iyo kuwo kale.
Intaa waxaa dheer, labada jiho waxay noqon karaan kuwo firfircoon, taas oo ah, waxay ku beddelaan xiriir kasta ama mid kasta oo taagan sababtoo ah ma beddelaan iyada oo aan loo eegin xidhiidhada. Iyadoo la tixgelinayo macluumaadkan waa inaad ogaataa inay jiraan dhowr siyaabood oo loo maro Raadi ciwaanka IP-ga qof, taas oo aad u faa'iido badan marka aad rabto inaad hesho ama aad aqoonsato qof.
Sida loo helo cinwaanka IP-ga qofka
Raadi cinwaanka IP-ga dhinaca saddexaad maaha hawl fudud, si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho habka aan hoos ku sharxi doono waxaad awoodi doontaa inaad gaarto. Habkani wuxuu ka kooban yahay isticmaalka iimaylka aad ka heshay qofka aad rabto inaad ogaato.
Tani waxay tixgelinaysaa in dhammaan faahfaahinta farsamada ee iimaylka ay ka muuqdaan madaxeeda, sida cad oo ay ku jiraan ciwaanka IP-ga. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha macluumaadka aad ka heli doonto kaliya furitaanka iimaylka.
Sidaa darteed, si loo fududeeyo habka, hoos, waxaan ku tusi doonaa tillaabooyinka la raacayo in barnaamijyada fariimaha elegtarooniga ah inta badan la isticmaalo. Sidan waxaad ku ogaan doontaa waxaad samaynayso, marka loo eego adeegga shabakadda ee aad isticmaasho si aad u maamusho iimaylkaaga:
Ka hel ciwaanka IP-ga qof Outlook Express
Haddii ciwaanka emailkaagu u dhigmo Muuqaalka Express, waa inaad raacdaa tillaabooyinka hoose si aad u ogaato ciwaanka IP-ga ee soo diraha:
Geli iimaylkaga sida caadiga ah
Markaad gasho, fur iimaylka qofka aad rabto inaad ogaato cinwaanka IP-ga.
Marka emaylka uu furmo, dhagsii ikhtiyaarka "Properties" oo ku yaal xagga sare ee shaashadda.
Dhowr doorasho ayaa soo muuqan doona oo waxaad dooran doontaa "File".
Markaas waxaad dooranaysaa "Details".
Ugu dambeyntii waxaad riixi doontaa "Farriinta asalka ah" waana taas.
Sidan, dhammaan faahfaahinta iimaylka la helay ayaa soo muuqan doona, oo ay ku jiraan waxaad raadinayso, the ciwaanka IP-ga soo diraha.
Ka hel ciwaanka IP-ga qof ee Apple Mail
Haddii adeegga shabakada aad u isticmaasho si aad u maamusho iimaylkaagu yahay Apple Mail, waa inaad raacdaa tillaabooyinka soo socda si aad u ogaato IP-ga qofka wax kuu soo qoraya:
U fur iimaylkaaga sida caadiga ah.
Markaad gasho, raadi oo dooro iimaylka cidda aad rabto inaad ogaato IP-ga.
Marka gudaha emailka, taabo "Menu" ikhtiyaarka ku yaal geeska bidix ee sare ee shaashadda.
Dhowr doorasho ayaa soo muuqan doona oo waxaad dooran doontaa "View."
Mar labaad waxaad arki doontaa dhawr doorasho oo waa in aad guji "Fariinta".
Ugu dambeyntii, calaamadee "Source" oo aad samaysay.
Dhamaadka talaabooyinkan cinwaanka emailka oo leh dhammaan faahfaahintiisa, oo ay ku jiraan cinwaanka IP-ga ee qofka soo diray.
Sida loo helo qof IP-ga Mozilla Tunderbird
Haddii iimaylkaagu iska leeyahay Mozilla Thunderbird, tillaabooyinka lagu helo cinwaanka iimaylka iyo sidaas darteed cinwaanka IP-ga waa kuwan soo socda:
Hadda fur fariinta uu kuu soo diray qofka aad doonayso inaad ogaato IP-ga.
Markaad gasho, dooro ikhtiyaarka "View" oo ku yaal midigta sare ee shaashadda.
Dhowr doorasho ayaa soo muuqan doona oo waxaad calaamadin doontaa "faahfaahinta fariinta".
Ugu dambeyntii, dhammaan xulashooyinka aad arki doonto, dhagsii "Isha farriinta"waana diyaar.
Dhowr ilbiriqsi gudahood waxaad la imaan doontaa macluumaadka aad raadineyso oo ugu wanagsan, kuma qaadan waqti dheer inaad raacdo talaabooyinkan.
Sida loo ogaado IP-ga qof Gmail-ka
Hadda, haddii iimaylka aad leedahay uu iska leeyahay Gmail Talaabooyinka la raacayo waa kuwo fudud sidii kuwii hore, kiiskan waa inaad samaysaa kuwan soo socda:
Geli iimaylkaga sida aad caadiyan u samayso
Markaad gudaha ku jirto, raadi oo fur iimaylka aad rabto inaad ogaato ciwaanka IP-ga.
Markaad gudaha u gasho, taabo astaanta falaarta ku taal geeska sare ee midig ee shaashadda.
Daaqad ayaa furmi doonta oo waa in aad riixdo calaamadda saddexda dhibcood leh, oo waliba ku taal geeska sare ee midig ee shaashadda.
Ugu dambeyntii, waxaad arki doontaa dhowr ikhtiyaar oo waxaad u socotaa inaad gujiso "Show original".
Marka la dhammeeyo, bog cusub ayaa furmi doona kaas oo ciwaanka iimaylka lagu soo bandhigi doono oo qaybta odhanaysa "SPF" waxaad awoodi doontaa inaad hel meesha Adress IP. Sideed u ilaalin kartaa iyada oo aan loo eegin adeegga shabakadda ee iimaylkaagu ka tirsan yahay, waxaad awoodi doontaa inaad hesho macluumaadka aad raadineyso, haddii aad raacdo tillaabooyinka aad akhriday markan warqadda.
Codsiyada lagu ogaanayo ciwaanka IP-ga ee qof
Markaad akhrido bilowga maqaalka, mid ka mid ah yoolalka cinwaanka IP-ga waa meel qof ama hel kombayutarka aad ku xidhantahay internetka. Sidaa darteed, marka aad hesho qof IP-giisa adigoo isticmaalaya habka kor lagu sharaxay, waxaad ogaan kartaa deegaankooda, taas oo ah, goobta juqraafi ahaaneed.
Si taas loo sameeyo, waa inaad isticmaashaa aaladaha qaarkood oo aad ka heli karto Google-ka, Google Play Store ama Store-ka aaladahaaga. Iyadoo la tixgelinayo inay jiraan kuwo badan iyo si loo fududeeyo habka raadinta, hoos, waxaan ku xusi doonaa kuwa ugu isticmaalka badan. Sidan oo kale, waxaad ku ogaan kartaa oo markaa go'aan ka gaartaa midka aad isticmaali doonto:
Markaad akhrinayso magacan, waxaad u malayn kartaa in codsigan loo isticmaalo oo kaliya in lagu aqoonsado cinwaankaaga IP-ga. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan faa'iidada kaliya ee ay leedahay, maadaama ay sidoo kale kuu ogolaan doonto inaad ogaato goobta qof isticmaalaya IP-ga.
Si aad tan u samayso, kaliya waa inaad raacdaa tilmaamaha soo socda oo dhawr ilbiriqsi gudahood waxaad heli doontaa macluumaadka:
Ka soo gal browserka aad dooratay bogga rasmiga ah ee codsiga"Waa maxay IP-gayga".
Markaad ku jirto boggeeda ugu weyn, dhagsii ikhtiyaarka sheegaya "Geolocate IP" oo ku yaal qaybta bidix ee sare ee shaashadda.
Bog cusub ayaa furmaya oo waa inaad ku qortaa IP-ga qofka aad u baahan tahay inaad ka ogaato sanduuqa ku qoran "IP Address".
Ugu dambeyntii, ku dhufo astaanta raadinta oo waad dhammaatay.
Khariidad ayaa soo bixi doonta oo ku tusinaysa meesha uu qofku joogo. Intaa waxaa dheer, xagga hoose ayaa lagu tusi doonaa macluumaadka ku saabsan dalka, magaalada, Latitude, Longitude iyo shirkadda internetka ku siisa. Sida laga yaabo inaad xaqiiqsatay, habka lagu helo macluumaadkan ma aha oo kaliya mid aad u fudud, laakiin waa mid aad u degdeg ah.
Codsiga Aaladaha IP - Utilities Network
Codsigan waxaa laga heli karaa Google Play Store ee qalabkaaga, wuxuu la jaan qaadayaa Android 4.1 ama ka sareeya. Intaa waxaa dheer, si aad u soo dejiso waa inaad haysataa kayd gudaha ah oo la heli karo oo ah 7,7 MB. Adigoo taas og, waxaad samayn doontaa oo kaliya waxyaabaha soo socda si aad u soo dejiso:
Ka fur Google Play Store qalabkaaga
Markaad gudaha gasho, u gudub mashiinka raadinta oo ku qor magaca codsiga kiiskan "Qalabka IP - Utilities Network".
Ugu dambeyntii, marka ay soo baxdo, taabo "Install" waana taas.
Marka codsiga si guul leh loogu rakibo qalabkaaga, raac tillaabooyinka hoose si aad u ogaato meesha IP-ga:
Fur codsiga aad hadda rakibtay.
Markaad gasho, taabo "Menu" ikhtiyaarka oo ku yaal dhinaca bidix ee shaashadda.
Dhowr doorasho ayaa soo muuqan doona oo waxaad dooran doontaa "Geolocate IP".
Hadda sanduuqa soo muuqda ku qor cinwaanka IP-ga ee qofka.
Ugu dambeyntii, dhagsii"Gelocate"waana diyaar.
Dhamaadka tillaabooyinkan, waxaad arki doontaa dhammaan faahfaahinta goobta ciwaankaas, sida dalka, gobolka, iyo kuwo kale. Sida aad arki karto, codsigan sidoo kale aad bay u fududahay in lagu helo goobta juqraafi ee qof.
Hel codsiga IP
Codsigan waxaa laga heli karaa App Store ee qalabkaaga macruufka, si aad ugu rakibto, waa in uu noqdaa version 11.0 ama ka dib waana in uu leeyahay 12 MB oo kayd ah. Markaad buuxiso shuruudahan, kaliya waa inaad raacdaa tillaabooyinka soo socda si aad u soo dejiso:
Geli App Store ee qalabkaaga.
Kadib, aad mashiinka raadinta oo ku qor"Raadi IP".
Ugu dambeyntii, marka codsigu soo baxo, taabo "Get" waana taas.
Sug dhowr ilbiriqsi arjigu inuu si sax ah u rakibo ka dibna raac talaabooyinkan si aad u hesho IP-ga:
Fur app-ka aad hadda soo dejisay.
Markaad gasho, dooro ikhtiyaarka "IP Address" oo aad ka heli doonto qaybta midig ee sare ee shaashadda.
Hadda ku qor IP-ga si aad ula tashato sanduuqa u dhigma.
Ugu dambeyntii, taabo "Search" oo aad samaysay.
Sida xaaladihii hore, macluumaadka la xidhiidha goobta juqraafiyeed ee IP-ga aad la tashatay ayaa soo muuqan doona. Sida aad arki karto, dhammaan codsiyada la sheegay way fududahay in la isticmaalo, sidaa darteed, go'aankaagu wuxuu ku salaysnaan doonaa qalabka aad leedahay.
Haddii xogtani ay kuu caddaatay oo aad hore u ogeyd sida loo ogaado qof IP-gaaga iyo sidoo kale sida aad ku heli karto, sii wad akhrinta tan blog. Sidoo kale, ku martiqaad asxaabtaada inay sidaas sameeyaan si ay iyaguna wax uga bartaan mawduucyadan xiisaha leh.
Waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad wax ka barato maqaalkan soo socda: Sida loola socdo taariikhda iibka taleefanka gacanta.
Sida loo furo faylka JNLP
Sida loo duubo ciyaaraha Wii
Sida loo qaabeeyo NTFS adoo isticmaalaya kombayutarka Mac OS
Previous: post Previous: Sida loo duubo ciyaaraha Wii
Next: post Next: Sida loo furo faylka JNLP
Leave a Comment Jooji jawaabta
hadda Jira [emailka waa la ilaaliyay] *
Leave arimahan madhan
Horumariye xirfad ahaan, xiiseeya qalabka. Tan iyo markii aan ahaa 11 sano jir dayactirka kombuyuutarrada. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Nala soo xiriir
Sida loo kabsado oo loo soo celiyo asalka hore ee Desktop gudaha Windows 10
KB4464455 Windows 10 Nooca 1809 Dhis 17763.107 - 13 Noofambar 2018
Sida loo doorto taariikhda lagu hakiyo cusbooneysiinta gudaha Windows 10
Motherboard-yada Macdanta Crypto
© Dayactirka Bios 2019
WOW Blog by Mawduucyada Acme